Manchester United Oo 'qiimo Jaban Ku Fasaxeysa Sergio Romero'
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United oo ‘qiimo jaban ku fasaxeysa Sergio Romero’
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay u ogolaato Sergio Romero inuu kooxda uga tagi karo kaliya 2.5 milyan ginni suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo.
Xiddiga reer Argentine ayaa haatan isku arka inuu kaalinta afaraad kaga jiro safka Old Trafford ee Ole Gunnar Solskjaer , iyadoo David de Gea , Dean Henderson iyo Lee Grant ay ka laga doorbido Romero.
Goolhayihii hore ee Sampdoria ayaa la rumeysan yahay inuu aad u doonayo inuu baxo waxaana uu isku dayay inuu qasbo inuu ka tago xagaagan, laakiin United ayaa loo maleenayaa inay ka hor istaagtay bixitaanka madaama aysan jirin koox diyaar u ah inay iska iibiso qiimaha Red Devils ee asking 5m.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay The Mirror , United ayaa haatan diyaar u ah inay aqbasho kala bar tiradaas oo loogu talagalay ninka aan la jeclayn Romero, kaasoo aan lagu darin safka Solskjaer ee Premier League ama Champions League.
Xiddiga reer Argentina ayaa haatan ku jira sanadkiisii ​​ugu dambeeyay ee heshiiskiisa Old Trafford, in kastoo Red Devils ay heysato fursad ay ku dari karto hal sano oo dheeri ah.
Romero, oo haatan 33 jir ah, ayaa kaliya 7 kulan oo Premier League ah u saftay United tan iyo markii uu yimid 2015, iyadoo inta ka harsan 61 kulan uu yimid Yurub iyo tartamada koobabka.
Previous articleManchester United oo guushii ugu horeesay ee gurigeeda ka gaartay West Brom.
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta Sterling, Jesus, Nunez, Ronaldo, Romero, Giroud, Henderson